Aha oku oku: wepu akwukwo, nkọwa, mejuputa, ntuziaka - Mkpụrụ ubi - 2020
Anyị na-eji oku oku na-akpọ nkụ mgbe ị na-eto ọka
Enwere ike iwepụ ego a na-atụ anya ya site n'ịkụpụta poppy ma ọ bụ ọka. Ụlọ ọrụ Switzerland bụ Syngenta amalitewo ịmalite ịdabere na ya, na-alụ ọgụ megide anụ ọhịa kwa afọ na perennial, bụ Callisto, bụ nke na-enyere aka ịzụlite ihe ubi n'ubi n'oge mmalite nke mmepe.
Usoro nke ime ihe na-arụ ọrụ
Ntuziaka maka ojiji na oriri
Mmekọrịta nke ọgwụ osisi ọgwụ na ọgwụ ndị ọzọ
Ọnọdụ nchekwa na ndụ ndụ
Ụdị nkwupụta na nkọwa
A na-eji ọgwụ ahụ eme ihe n'ụdị nkwakọba akwụkwọ dịka ise n'ụdị nkwusiri. Ihe na-arụsi ọrụ ike n'ime ihe mejupụtara - mesotrione. A na-etinye akwụkwọ ahịhịa ndụ na ahịhịa na ahịhịa ndụ. Ikwusi usoro nke mmeghari aha n'ime ahihia nke ahihia, ihe oru a na-asacha ebe ahu, na-enye ihe di oke omimi maka ọnwa abuo. "Oku oku" na-egbochi ụdị ogwu, ahịhịa ahịhịa (millet, eriri afọ), ata nke ezinụlọ ezé, chamomile na ndị ọzọ.
Na ịlụ ọgụ megide ahịhịa, ọgwụ ndị dị ka Agrokiller, Ground, Roundup, Lapis Lazuli, Zenkor, Lontrel-300 ga-enyekwara gị aka.
Mesotrione - ihe na-arụ ọrụ nke ọgwụ, bụ otu okwu nke ahịhịa ndụ, ahịhịa nke nwere ike imebi omenala ndị ọzọ. Ihe a na - egbochi mkpụrụ ndụ nke mkpụrụ ndụ, na - emebi usoro nke njikọ na anụ ahụ.
Ị ma? Ọ bụ ọtụtụ omenala oge ochie ka e si agwọ ọrịa poppy. N'Ijipt oge ochie, o toro n'ugbo. dị ka ihe na-emenye ụjọ ma na-asọpụrụ dị ka ihe nnọchianya nke ụra. Na Rome oge ochie, a na-ewere poppy ahụ dị ka akara nke Ceres - chi nwanyị ugbo; na Gris oge ochie - ihe nnọchianya nke chi nke ụra Hypnos na Morpheus.
N'ime ụbọchị ole na ole, osisi ọgwụ ahụ na-etinye ya kpamkpam n'ime epupụta, ị ga-esi na mgbọrọgwụ, ma mgbe otu izu ma ọ bụ abụọ gasịrị, dabere na ụdị ahịhịa na ọnọdụ ihu igwe, ahịhịa ahụ na-anwụ. A pụrụ ịhụ mmetụta ọjọọ nke ịṅụ ọgwụ ọjọọ na anụ ahụ.
"Oku oku" bu ahihia nke onye ngosiputa nwere ike idozi ya dika ntuziaka. Ọkara nke tank ahụ jupụtara na mmiri, gbakwunye ego kwesịrị ekwesị nke ọgwụ ahụ, ma, mgbe ị na-emegharị, jupụta tank mmanụ ahụ ruo ọgwụgwụ.
Ọ dị mkpa! A na-atụ aro ka a rụọ ọgwụ ahụ na ihu igwe dị jụụ ka ị ghara igbochi ihe ndị ahụ na-agbapụ na omenala ndị agbata obi, usoro oge - ụtụtụ ma ọ bụ n'ehihie.
Maka ikpughe nke ọma ọ pụtara na ọ bụ ihe na-achọsi ike iji ahịhịa ndụ n'oge uto nke ata. Ihe mgbakwunye nke adjuvant Corvette (ihe na-eme ka mmetụta nke pesticides na ọgwụ ndị na-emepụta ihe) na ngwakọta tank ga-enyere aka na-emetụta ata. Tinye ngwaahịa maka lita lita nke ngwọta - ọkara otu liter nke adjuvant.
Ọnụ ọgụgụ oriri:
Maka ọka kwa hectare nke ókèala site na 0.15 l ruo 0.25 l na mgbakwunye nke Corvette, a na-emepụta mkpụrụ osisi ma n'oge mmalite nke ọganihu na usoro nke isii epupụta, ọgwụgwọ megide ata anụ ọhịa na anụ ọhịa;
Ọgwụgwọ Poppy - 0.2 l / ha + adjuvant, megide ata ata na biennial na mmepe mmepe nke 2-4 epupụta.
Ọ dị mkpa! Ọ bụ ekwesighi iji ọgwụ ahụ mgbe osisi na-enwe nchekasị n'ihi mgbanwe dị egwu na ọnọdụ ihu igwe (ntu oyi, oké ọkọchị); n'oge mmiri ozuzo ma ọ bụ igirigi dị ukwuu.
Olulu oku "oku oku", dika nkowa ya si di, mekorita nke oma dika uzo ozo. Ọzọkwa, maka mmetụ dị mma, ọ bụ ihe na-achọsi ike iji ya na mix mix na ndị dị otú ahụ dị ka, dịka ọmụmaatụ, Gold Dual ma ọ bụ Milagro. Tupu ịgwakọta ọgwụ iji jide n'aka na usoro okwu ha dabara adaba, mara onwe gị na ihe dị iche iche nke ọgwụ niile. Mgbe ị na-agwakọta, gbakwunye ihe na-esonụ mgbe nanị ịmechara nke mbụ.
Ọ dị mkpa! A naghị atụ aro iji oku na-akpọ Oneisto otu izu mgbe ọ gwọchara ya na ụmụ ahụhụ, yana ịkwanye ha mgbe a gwọchara ya. Iwu a na-emetụta ụmụ ahụhụ ndị nwere akụkụ organophosphorus na thiocarbamates.
Nje ọgwụ abụghị phytotoxic ma ọ bụrụ na ị na-agbaso ndụmọdụ nile na ịdọ aka ná ntị na ntụziaka.
Ala ahịhịa maka ọka na poppy adịghị dị ize ndụ maka ụmụ mmadụ, mammals na aṅụ, enwere ike iji ya mee ihe mgbe a na-eme nnyocha. Dị ka osisi ahịhịa ndị ọzọ, o nwere mmachibido iji mmiri ọṅụṅụ na azụ azụ n'akụkụ ọdọ mmiri na mmiri ọṅụṅụ.
Isi uru nke ngwá ọrụ ahụ:
Enwere otutu ngwa gbasara usoro mmepe nke omenala.
Usoro dị irè nke ihe.
Enweghị mgbubigara ókè maka ọdịbendị a gbadoro.
Ọ ga-ekwe omume ijikọta ya na ọgwụ ndị ọzọ.
Ntughari ngwa ngwa - ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ahịhịa ọka niile.
Mmetụta ugboro ugboro nke onye na-elekọta gị n'ihi mmetụta ala.
Ị ma? Mkpụrụ ọka ọka adịghị edo edo mgbe nile, ha nwere ike ịcha ọbara ọbara, na-acha ọcha, na ink-black. Otutu otutu osisi nke di iche iche "Glass Gem" dika ima atu, dika udi iko. N'ime ha, n'ụzọ, ma e wezụga maka ọka wit na popcorn, mee ọtụtụ ihe eji achọ mma.
Jide ngwaahịa ahụ mechie na nkwakọ ngwaahịa mbụ ya. Nchekwa nchekwa dị elu site na -5 ° C ruo + 35 Celsius C. Nchekwa dị akọrọ, site na ụmụaka na anụ ụlọ, ọgwụ ọjọọ na nri. Ndụ ndụ nwere afọ atọ site na ụbọchị mmepụta.
Iji chịkọta: iji ngwá ọrụ ahụ mee ihe ga-enyere aka mee ka ogo na oke nke owuwe ihe ubi n'ọdịnihu bido. Ọ ga-amasị m itinye otu ihe ọzọ maka uru niile e depụtara na ya: nchịkọta a adịghị akpata nkwụsi ike ma bụrụ ihe ndabere maka ngwakọta tank.